အသက်ဘေးကြုံလျှင်၊မတရား စွတ်စွဲခံရလျှင်၊ဋ္ဌာနမပြောင်းလိုလျှင် အမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ ယတြာ – Pwintsan
အမြစ်အညွန့် မတွန့််စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း များသည် အကာအကွယ်စွမ်းအား တည်မြဲမှုစွမ်းအား၊ အားကောင်းသည်ဖြစ်၍…
၁ ။ အသက်ဘေးအန္ဒရယ်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရသော အချိန်များ..
၂။ မတရား စွတ်စွဲ လုပ်ကြံခံရခြင်းများကြုံနေတဲ့ အချိန်များ
၃ ။ ရောဂါဝေဒနာ ကြီးမားပြင်းထန် ခံစားနေရသည့် အချိန်များ..
၄ ။ အန္ဒရာယ်များသည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေချိန်များ..
၅ ။ လက်ရှိနေထိုင်ရာ အိုးအိမ် ၊ လုပ်ငန်း ၊ ဋ္ဌာနတို့မှ မပြောင်းမရွှေ့လိုပဲ တည်မြဲလိုသည့် အချိန်များ..
၆ ။ ရန် ၊ ဘုမ္မိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမ္မိကြီးကဲ့သို့ ဂြိုဟ်ဆိုး ကိန်းဆိုး သက်ရောက်နှစ် အဆိုးများသို့ ရောက်ရှိနေချိန်များတွင်သာ…အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း တိုိ့ကို တင်လှူထားခြင်း ပြုရပါမယ်။
၁ ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးထွက်ခွာ ၊ ဘုရားဖူး ၊ အလုပ်ရှာ ၊အလည်အပတ် ပြုကြမည့်သူများ…
၂ ။ အချုပ်အနှောင်ခံနေရသူ ၊ ထောင်ကျနေသူ ၊ ဆေးရုံတက်နေသူများ..
၃ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ ခလေးမီးဖွားမည့်အချိန်..
၄ ။ အမျိုးသမီးများ လစဉ် ရာသီသွေးပေါ်သည့်အချိန်များ..နှင့်မည်သို့သော အခက်အခဲ ပြသနာ အကြောင်းတစုံ တရာမရှိပါပဲ…
အမြစ်အညွန်ါ့ မတွန့်စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်းများကို ( လုံးဝ) တင်လှူခြင်း မပြုရပါ။
တနင်္ဂင်္နွေသားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..သစ္စာပန်း ၊ သဇင်ပန်း ၊ သစ်စိမ့်ရွက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်မှာ ၉ သို့မဟုတ် ၂၉ ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။
တနင်္ဂနွေ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် ပုလဲပန်း ၊ မြတ်လေးပန်း ၊ ဖယောင်းပန်း ၊ မရမ်း ၊ မြရာ တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၉ သို့မဟုတ် ၃၆ ဖြစ်ပါတယ် ။
တနင်္ဂနွေ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် ဒါန်းကြီး ၊ ဒါန့််ကျွဲ ၊ ထန်းကျင့်် တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၉ သို့မဟုတ် ၂၅ ဖြစ်ပါတယ်။
တနလာင်္သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်
အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ ထင်းရှူး ၊ ဒန့်ဒလွန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်မှာ ၁၁. သို့မဟုတ် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။
တနင်္လာ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် သပြေ ၊ သင်္ဘော ၊ သဖန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၁၁. သို့မဟုတ် ၄၀. ဖြစ်ပါတယ် ။
တနင်္လာ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် သြဇာ.့ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့်် ၄. သို့မဟုတ် ၁၄ ဖြစ်ပါတယ်။
အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..အုန်းဖူး ၊ အိုးဗုတ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၆. သို့မဟုတ် ၂၅. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။
အင်္ဂါ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်ဒဟတ်ရွက် ၊ ဒဟတ်ပန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၁၃. သို့မဟုတ် ၃၁. ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂါ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် ခရေ ၊ ငုဝါ ၊ ကလော ၊ ခရမ်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၆. သို့မဟုတ် ၃၂. ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..ကသစ် ၊ ကြက်သွန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၈. သို့မဟုတ် ၃၆. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် အုန်းနှဲ (ဆေးရိုးပင်) တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၈. သို့မဟုတ် ၁၆. ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် စံပယ် ၊ စိန်ပန်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၈. သို့မဟုတ် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသပတေး သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ.. စွယ်တော်ရွက့် ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၁၀. သို့မဟုတ် ၁၈. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။
ကြာသပတေး သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် ကျီးအာရွက် တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၃. သို့မဟုတ် ၂၁. ဖြစ်ပါတယ် ။
ကြာသပတေး သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်လောက်သေရွက့်် ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၀. သို့မဟုတ် ၃၈. ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာ သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..ဝံအူ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဝံအူ ရှားပါးသည့်အတွက် အတာအိုးကဲ့သို့ အိုးအသေးထဲကို ရေ ၁၇ခွက် ထဲ့ပါ ရေထဲ့ထားသော အိုးထဲတွင် ရွက်လှ ၁၇ ရွက်ကို အညွန့်အဖျားကို အပေါ်ဖက်တွင်ထား၍ ထိုးလှူထားရပါမည်။မွေးနေ့အပတ်စဉ် အဟောင်းစွန့် အသစ်လဲလှူပါ ၊ အိုးကိုဆက်သုံး၍ ရပါတယ်။
သောကြာ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်ဇော်ကျား၊ စင်္ကြာပန်း ၊ စက္ကူပန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်က ၅. သို့မဟုတ် ၂၃. ဖြစ်ပါတယ် ။
သောကြာ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်ပိတောက် ၊ ပိန္နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၂. သို့မဟုတ် ၂၉. ဖြစ်ပါတယ်။
စနေ သားသမီး ဘင်္ဂင်္ဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်
အမြစ်အညွန့်် မတွန့်စေရတို့မှာ..မန်ကျီး ၊ ပွေးကိုင်း ၊ မြင်းခွာ ရွက် တို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်က ၇. သို့မဟုတ် ၃၄.ဖြစ်ပါတယ် မွေးနေ့အပတ်စဉ် အဟောင်းစွန့် အသစ်လဲလှူပါ ၊
စနေ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်လေးညှင်း ဖြစ်ပါတယ်အရေအတွက်က ၂၅ ပွင့် ဖြစ်ပါတယ်။
စနေ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် သင်အူ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အူမရပါက အတာအိုးအရွယ် အိုးထဲကို သဲ ၂၁ဆုပ် ထဲ့ပါ အဲဒိသဲအိုးထဲမှာ အုန်း၆ညွန့် ထိုးလှူ လို့ရပါတယ်။
၇.ရက်သားသမီးအားလုံး ဘေးရန်ကွယ်ပျောက် ချမ်းသာရောက်ကြပါစေသော်…
ဆရာအောင်မင်းမင်း၀၉ ၇၉၉၉ ၅၅၇ ၅၈ မင်္ဂလာဒုံ(ကံကောင်းသူတို့ ဆုံစည်းရာ)
၁ ။ အသကျဘေးအန်ဒရယျကွုံတှေ့ ရငျဆိုငျနရေသော အခြိနျမြား..
၂။ မတရား စှတျစှဲ လုပျကွံခံရခွငျးမြားကွုံနတေဲ့ အခြိနျမြား
၃ ။ ရောဂါဝဒေနာ ကွီးမားပွငျးထနျ ခံစားနရေသညျ့ အခြိနျမြား..
၄ ။ အန်ဒရာယျမြားသညျ့ အရပျဒသေသို့ ရောကျရှိနခြေိနျမြား..
၅ ။ လကျရှိနထေိုငျရာ အိုးအိမျ ၊ လုပျငနျး ၊ ဋ်ဌာနတို့မှ မပွောငျးမရှလေို့ပဲ တညျမွဲလိုသညျ့ အခြိနျမြား..
၆ ။ ရနျ ၊ ဘုမ်မိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမ်မိကွီးကဲ့သို့ ဂွိုဟျဆိုး ကိနျးဆိုး သကျရောကျနှဈ အဆိုးမြားသို့ ရောကျရှိနခြေိနျမြားတှငျသာ…အမွဈအညှနျ့ မတှနျ့စရေ အညှနျ့ အခကျ အရှကျ ပနျး တို့ကို တငျလှူထားခွငျး ပွုရပါမယျ။
၁ ။ ပွညျတှငျး ပွညျပ ခရီးထှကျခှာ ၊ ဘုရားဖူး ၊ အလုပျရှာ ၊အလညျအပတျ ပွုကွမညျ့သူမြား…
တနင်ျဂင်ျနှသေားသမီး ဘင်ျဂဖှား ၊ အထှနျးဖှား ၊ အဓိပတိဖှားမြားအတှကျအမွဈအညှနျ့ မတှနျ့စရေတို့မှာ..သစ်စာပနျး ၊ သဇငျပနျး ၊ သဈစိမျ့ရှကျတို့ဖွဈပါတယျ။ အရအေတှကျမှာ ၉ သို့မဟုတျ ၂၉ ဖွဈပါတယျ၊ ရရာတဈမြိုးသာလှူရပါမယျ။
တနင်ျဂနှေ သားသမီး ပုတိဖှား ၊ သိုကျဖှားမြားအတှကျ ပုလဲပနျး ၊ မွတျလေးပနျး ၊ ဖယောငျးပနျး ၊ မရမျး ၊ မွရာ တို့ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျက ၉ သို့မဟုတျ ၃၆ ဖွဈပါတယျ ။
တနင်ျဂနှေ သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျ ဒါနျးကွီး ၊ ဒါနျ့ကြှဲ ၊ ထနျးကငျြ့ တို့ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၉ သို့မဟုတျ ၂၅ ဖွဈပါတယျ။
တနလာင်ျသားသမီး ဘင်ျဂဖှား ၊ အထှနျးဖှား ၊ အဓိပတိဖှားမြားအတှကျ
တနင်ျလာ သားသမီး ပုတိဖှား ၊ သိုကျဖှားမြားအတှကျ သပွေ ၊ သင်ျဘော ၊ သဖနျး တို့ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျက ၁၁. သို့မဟုတျ ၄၀. ဖွဈပါတယျ ။
တနင်ျလာ သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျ သွဇာ.့ ဖွဈပါတယျ၊ အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၄. သို့မဟုတျ ၁၄ ဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂါ သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျ ခရေ ၊ ငုဝါ ၊ ကလော ၊ ခရမျး တို့ ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၆. သို့မဟုတျ ၃၂. ဖွဈပါတယျ။
ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီး ပုတိဖှား ၊ သိုကျဖှားမြားအတှကျ အုနျးနှဲ (ဆေးရိုးပငျ) တို့ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျက ၈. သို့မဟုတျ ၁၆. ဖွဈပါတယျ ။
ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျ စံပယျ ၊ စိနျပနျး တို့ ဖွဈပါတယျ၊ အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၈. သို့မဟုတျ ၂၇. ဖွဈပါတယျ။
ကွာသပတေး သားသမီး ဘင်ျဂဖှား ၊ အထှနျးဖှား ၊ အဓိပတိဖှားမြားအတှကျအမွဈအညှနျ့ မတှနျ့စရေတို့မှာ.. စှယျတျောရှကျ့ ဖွဈပါတယျ။အရအေတှကျမှာ ၁၀. သို့မဟုတျ ၁၈. ဖွဈပါတယျ၊ ရရာတဈမြိုးသာလှူရပါမယျ။
ကွာသပတေး သားသမီး ပုတိဖှား ၊ သိုကျဖှားမြားအတှကျ ကြီးအာရှကျ တို့ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျက ၃. သို့မဟုတျ ၂၁. ဖွဈပါတယျ ။
ကွာသပတေး သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျလောကျသရှေကျ့ ဖွဈပါတယျ၊ အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၁၀. သို့မဟုတျ ၃၈. ဖွဈပါတယျ။
သောကွာ သားသမီး ပုတိဖှား ၊ သိုကျဖှားမြားအတှကျဇျောကြား၊ စင်ျကွာပနျး ၊ စက်ကူပနျး တို့ဖွဈပါတယျ။အရအေတှကျက ၅. သို့မဟုတျ ၂၃. ဖွဈပါတယျ ။
သောကွာ သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျပိတောကျ ၊ ပိန်နဲ့ ဖွဈပါတယျ၊အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၁၂. သို့မဟုတျ ၂၉. ဖွဈပါတယျ။
စနေ သားသမီး ဘင်ျဂင်ျဖှား ၊ အထှနျးဖှား ၊ အဓိပတိဖှားမြားအတှကျ
အမွဈအညှနျ့ မတှနျ့စရေတို့မှာ..မနျကြီး ၊ ပှေးကိုငျး ၊ မွငျးခှာ ရှကျ တို့ ဖွဈပါတယျ၊ အရအေတှကျက ရ. သို့မဟုတျ ၃၄.ဖွဈပါတယျ မှေးနအေ့ပတျစဉျ အဟောငျးစှနျ့ အသဈလဲလှူပါ ၊
စနေ သားသမီး ရာဇဖှား ၊ မရဏ ဖှားမြားအတှကျ သငျအူ ဖွဈပါတယျ၊ အရအေတှကျအားဖွငျ့ ၂၇. ဖွဈပါတယျ။
သငျအူမရပါက အတာအိုးအရှယျ အိုးထဲကို သဲ ၂၁ဆုပျ ထဲ့ပါ အဲဒိသဲအိုးထဲမှာ အုနျး၆ညှနျ့ ထိုးလှူ လို့ရပါတယျ။
၇.ရကျသားသမီးအားလုံး ဘေးရနျကှယျပြောကျ ခမျြးသာရောကျကွပါစသေျော…
ဆရာအောငျမငျးမငျးဝ၉ ရ၉၉၉ ၅၅၇ ၅၈ မင်ျဂလာဒုံ(ကံကောငျးသူတို့ ဆုံစညျးရာ)